Kedu nọmba nọmba visa m? Anyị na-egosi gị otu esi achọta ya | Akụkọ Njem
Monica sanchez | | Atụmatụ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga njem njem mba, ị nwere ike ịchọrọ visa. Nke a bụ ikike enyere obodo nke isi site na ndị nnọchi anya ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo si mba ọzọ. Enwere ụdị visa dị iche iche, ọ ga-adabere na ogologo oge ị na-eme atụmatụ ịnọ, na-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ebe na otu ị ga-esi chọọ ya, na anyị ga-enyere gị aka ịchọta nọmba visa gị. Echefula ya.
1 Visa ma ọ bụ visa, akwụkwọ dị mkpa iji gaa
2 Ihe ndị achọrọ iji tinye maka visa ahụ
3 Dị Visa
4 Kedu mba ndị chọrọ visa maka nwa amaala Spanish?
5 Etu esi etinye akwụkwọ maka visa ndị njem?
6 Ha nwere ike ịgọnahụ m visa?
7 Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji hazie visa?
8 Kedu nọmba nọmba visa m?
Visa ma ọ bụ visa, akwụkwọ dị mkpa iji gaa
Visa a bụ akwụkwọ nke ndị ọchịchị na-etinye na paspọtụ ndị na-egosi na ha enyochala akwụkwọ ahụ ma were ya dị ka ihe ziri ezi. Ọ bụ iwu na ị ga-eyi ya n'ọtụtụ mba. Dịka ọmụmaatụ, na United States, ma ị ga-anọ ụbọchị ole na ole ma ọ bụ na ịchọrọ ibi ebe ahụ, ị ​​ga-ewere ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ọdụ ụgbọ elu, ha ga-eme ka ị laghachi.
Ihe ndị achọrọ iji tinye maka visa ahụ
Nanị ihe achọrọ bụ na ịnọ ga-adị ogologo karịa ụbọchị 90 (ọnwa atọ).
N'izugbe, e nwere ụdị visa abụọ:
Nọrọ: Nke a ga - abụ nke ị ga - arịọ ma ọ bụrụ na ị bịara njem ma ọ bụ maka ọmụmụ ihe.
Ebe obibi: ọ bụrụ na ịbịa rụọ ọrụ (ọrụ onwe gị ma ọ bụ ọrụ) ma ọ bụ iji nọrọ ma biri.
Ma dabere na mba na ihe mere ị ji eme njem, e nwere ụfọdụ ndị ọzọ:
Ndị ọrụ bekee
Ndị chọrọ ịlụ
Ndị ọrụ okpukpe
Ọrụ nwa oge
Ndi oru nta akuko
Ndị nnọchi anya gọọmentị, ndị isi, ndị ọrụ nke mba ụwa na NATO
Kedu mba ndị chọrọ visa maka nwa amaala Spanish?
Ọ bụrụ na ị bụ onye Spen na ị ga-aga mba ndị a, na mgbakwunye na United States, ị ga-etinye akwụkwọ maka visa:
Etu esi etinye akwụkwọ maka visa ndị njem?
Visa njem nleta, nke a makwaara dị ka B2, bụ akwụkwọ ịchọrọ ịga mba ọzọ. Ọ ga-enyere gị aka nlegharị anya, ileta ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, ma ọ bụ maka ọgwụgwọ; kama, ị gaghị enwe ike iji ya rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na Immigration chọpụtara, ha nwere ike ịkagbu gị visa.
Nke a bụ akwụkwọ ikike na-abụghị nke onye kwagara mba ọzọ, nke pụtara na n'ụkpụrụ ị na-emeghị atụmatụ ibi na-adịgide adịgide na mba ahụ. Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị gbanwere obi gị, ị ga-etinye akwụkwọ maka visa kwekọrọ.
Iji rịọ ya, Ga-aga n ’ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo ma ọ bụ consulate nke obodo na-aga obodo gị. Were foto gị nke gosipụtara ihu gị na paspọtụ gị. Ọ naghị afụ ụfụ ịnara kaadị akwụmụgwọ, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ị ga-akwụ ụgwọ.
Ha nwere ike ịgọnahụ m visa?
Ọ dị obere, mana ọ dabere na nke ọ bụla. Iji zere nke a, gbalịa ime ka onye ọrụ ndị ọrụ ibe anyị kwenye na, nke mbụ, ị naghị ezube ịnọrọ ma biri na, nke abụọ, na i nwere ezuru ego. Maka nke a, ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na i tinye akwụkwọ maka kaadị obibi wee rịọ maka visa, o yikarịrị ka ha agaghị enye gị otu.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji hazie visa?
Ọ bụrụ na ị jiri aka gị napụta ihe niile wee pụta na akwụkwọ achọrọ achọrọ ziri ezi, ọ na-ewekarị karịa ụbọchị ise. Ọ dịchaghị, inwere ike iji ya mee atụmatụ njem gị.
Ozugbo inwere ya, ikekwe ị ga-eche ihe nọmba visa ahụ bụ, ebe kaadị ndị a nwere a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ahụ nwere njirimara nke ha, yabụ ka anyị hụ otu anyị nwere ike isi mata ya ọsọ ọsọ.
Iji nwee ike ịchọta nọmba Visa na dọkụmentị, naanị anyị ga-enweta ya n'aka anyị ma nwee ike ihu ya n'ihu. N'ụzọ dị otú a, naanị anyị ga-enyocha ihe dị n'akụkụ ala aka nri nke na-acha uhie uhie, kpọmkwem usoro ọnụọgụ nke na-egosipụta njirimara ndị a na nọmba Visa anyị na-atụ anya ya ogologo oge.
Located chọpụtala ya? Ugbu a, ị ga-eme dee nọmba visa ma ọ bụ buru ya n’isi iji zere nsogbu. Ewezuga nke a ịkwesighi inwe nsogbu ọ bụla inwe ike ịchọta nọmba visa anyị, ọ naghị adịkarị iche.
Nọmba visa a ga-enyere gị aka megharia visa gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọtụ obere. N'ezie, cheta, ọ bụrụ na ihe kpatara njem gị gbanwere, ọ dị mkpa ka ị tinye maka visa kwekọrọ. Yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị banyere ihe ọ bụla.
Anyị nwere olile anya na anyị enyerela gị aka ịmata ihe visa bụ, ihe maka ya na otu esi achọta nọmba gị. Nwee ezigbo njem!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Kedu nọmba nọmba visa m?
Typedị visa (B1 / B2) site na EU na enwere m koodu, enwere m nyocha ya ma ọ bụ otu ihe na-egosi n'akụkụ aka nri nke koodu ahụ, na nsọtụ ọzọ nke visa ahụ, mana n'oge a na m na-ede ya na ụdị njem nke na-ajụ m, ọ naghị amata m. Ọ na-ekwu na ọ ga-abụrịrị leta nke ọnụọgụ asaa (#s) ma ọ bụ mkpụrụ 7 (#s) na ọ dị n'akụkụ aka nri nke akwụkwọ ahụ na ọ bụ ebe ọnụọgụ m gosiri na mbụ na nke m mere amatala dị ka nọmba visa m.